Indaba ka-BricMaker |
Ungayikhetha kanjani imbasa efanelekile ngokuya ngezimo zasendaweni?
Njengamanje, izikhuni eziyinhloko zezitini zobumba ezi-sintered kanye namathayili e-China yi-tunnel kiln ne-rotary fire (i-tunnel tunn kiln). Umhubhe womlilo unezinhlobo ezahlukahlukene futhi ungahlukaniswa ngokususelwa kuzici ezahlukahlukene: ungahlukaniswa njengezingxenye ezinkulu zesiphambano ...
Ungakwenza kanjani ukuklama komlilo okunengqondo?
Noma ngabe ukwakheka komlilo kunengqondo futhi kuphelele, kuvimbela ngqo abatshalizimali futhi kubuye kuvimbele ikhwalithi yomlilo. Ngokuqhathanisa okuningi phakathi kwemigqa ehlukene yokukhiqiza, sithole ukuthi uhlobo olufanayo lwezinto zokusetshenziswa nohlobo olufanayo lwe-kil ...